Layma's World: March 2008
Posted by lay-ma at 4:30 PM 19 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 7:43 PM7comments Links to this post
Labels: Cartoons, Seasonal Post
- ရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း..ကွမ်းစားခြင်း တားမြစ်ထားသောကြောင့် ဘုရားဖူးပြည်သူများ စိတ်ချမ်းမြေ့….။
- ပြည်သူများ ဘေးကင်းစွာ ဘုရားဖူးနိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးများ အပြည့်အ၀ ချထားသောကြောင့် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ဘုရားဖူးခွင့်ရ…။
- ဓါတ်လှေကားသို့ လျှောက်လမ်းတွင် တောင်းရမ်းသူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အခြေအနေကြည့်၍ ပြေးပြေးလွှားလွှား သွားသွားလာလာ အလှူခံလျက်ရှိ…။
- တိရိစ္ဆာန်အတော်များများ ပရိုမိုးရှင်းဖြင့် မြို့တော်သစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ….။
- ပြောင်းရွှေ့သွားသော အကောင်များနှင့် ပတ်သက်၍ … မျောက်ရွာမှ မျောက်များ သန်းရှာရင်း အတင်းတုပ်လျက်ရှိ….။
- မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ…. စိမ်းလန်းစိုပြည် အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းရှိသော ဥယျာဉ်ကြီးသည် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် စည်ကားလျက်ရှိနေ….။
- ၀င်ကြေး ၁၀၀ … ထွက်ကြေး ၁၀၀…(ပါကင်မရလို့ တပတ်ပြန်ပတ်…ပြန်ဝင်ရင်လည်း ၁၀၀ )…။
- မုန့်ပဲ သွားရေစာ ရောင်းသူများ… လျှောက်လမ်းများတွင် ပြည့်…။
- ပစ္စည်းမှန်…ဈေးမှန် ( ဆစ်နိုင်မှ တော်ရာကျမည် ) အမျိုးအမည်ပေါင်းများစွာ ရောင်းချနေ…။
- သင်္ကြန် မျက်မှန်..၊ ရေသေနတ်..၊ ဦးထုပ်အမျိုးမျိုး…၊ သီချင်းခွေများ…၊ သင်္ကြန်နှင့် ပတ်သက်သမျှ အတိုအထွာများ ရောင်းချနေ….။
- Date expire ဖြစ်ရန် သိပ်မလိုတော့သော စားသောက်ကုန်များကို special discount ဖြင့် ရောင်းချ….။
- ဈေးပွဲတော်… လက်ဝှေ့ ပွဲ…. စတိတ်ရှိုးပွဲများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိသောကြောင့် သစ်ပင်များ..ကုန်းမြင့်လေးများနဲ့ ရေကန်ကြီးက မျက်ရည်စို…( သူတို့အလှမပေါ်လွင်လို့…တဲ့…)
- ဘာဆိုင် ညာဆိုင်များပေါများ… ဟိုအမှိုက်..ဒီအမှိုက်…လူအမှိုက်များလည်း…ဟိုတစ်စ..ဒီတစ်စ…။
- သို့သော်…ကန်တော်ကြီးသည် လှဆဲ… ကန်ရေပြင်ကို ဖြတ်လာသောလေသည် လတ်ဆတ်ဆဲ…။ ( မယုံရင် တင့်ကားကုန်းဘက်ကိုသွား…)
- အသုတ်နှင့် အကြော်ဆိုင်များ လက်ရာ အလွန် ညံ့ဖျင်း….။
- အင်းယားသည် ချစ်သူစုံတွဲတို့ ကွန်းခိုရာ ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဆက်လက်ထိန်းထားဆဲ....။
- ဆေးရုံ…ဆေးခန်း…ဆရာဝန်…သူနာပြု…ပေါကြွယ်ဝ…( ရှားတာ..ဆေး…)
- မြန်မာဇာတ်လမ်းများသည် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းများကို တိုးမပေါက်ပေမယ့် မြန်မာအနုပညာရှင်များ၏ သတင်းအတင်း သည် ကိုရီးယားနုပညာရှင်များထက် အားပေးသူများပြား…။
- ခုတောင်… နိုင်နိုင်းတစ်ယောက် …အတုမိသွားလို့ဆိုလား…..ဘာလား……။
- အသံချိုချိုအေးအေးပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြသော ကို ငှက် နှင့် ဦးထီးတို့ ကျောခိုင်းထွက်ခွာ…။
- အမှတ်တရ … အလွမ်းပြေ … ပြန်ဆိုခွေများ… ဆက်လက်ထွက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိ …..။
- စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၏ သီချင်းများ ( တောဂေါ်လီ နှင့် ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ) ကို မိန်းကလေးများ သဲသဲလှုပ်အားပေး…၊ အားပါးတရ အော်ဆို…။ သင်္ကြန်ရောက်ရင်လည်း လူငယ်တွေ အော်ကြပြန်ဦးမယ်…။
Posted by lay-ma at 5:33 AM 17 comments Links to this post
ဇွတ် ... ပြုတ်
Posted by lay-ma at 12:31 AM7comments Links to this post
လေးမ ၀မ်းမြောက်ရပါအံ့...။ ။
Posted by lay-ma at 3:38 PM9comments Links to this post
Posted by lay-ma at 11:54 PM9comments Links to this post
Posted by lay-ma at 4:23 AM9comments Links to this post
Labels: Link to the past, Poem